Posted by zizawa ⋅ 27/05/2010	⋅ 34 Comments
 ဂျာမနီ၊ ဂျပန်နဲ့အီတလီက အဓိက၀င်ရိုးစွန်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီး ရိုမေးနီးယား၊ ဘူဂေးရီးယား၊ ဟန်ဂေရီနဲ့ယူဂိုးစလားဗီးယားတို့လည်း ၀င်ရိုးတန်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ မှာပါတယ်။ အာရှမှာ ထိုင်းဟာ ၀င်ရိုးတန်းစာချုပ်မှာ လက်မှတ်မထိုးပေမယ့် ဂျပန်နဲ့ စစ်ရေး မဟာမိတ်စာချုပ်ချုပ်ပြီး ဗမာပြည် စစ်ဆင်ရေးတွေကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် အကူအညီ ပေးခဲ့တယ်။ ၀င်ရိုးတန်းသုံးနိုင်ငံ မဟာမိတ်စာချုပ်ကို ၁၉၄၀ စက်တင်ဘာမှာ ချုပ်တယ်။  Nicholas Tarling’s A Sudden Rampage ပထမအခန်း
Posted by tint oo | 28/05/2010, 07:03 Reply to this comment	ကျန်ခဲ့ ပြန်ပြီ
Posted by tint oo | 28/05/2010, 07:26 Reply to this comment	ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ။ ပြောခဲ့တဲ့ စာအုပ်စာရင်းမှာ တချို့ စာအုပ်တွေကို (ဖက်ဆစ်တွေ ပတ်လည် ၀ိုင်းပါလို့ )ကျနော် မဖတ်ဖူးတဲ့အပြင် ကြားတောင် မကြားဖူးပါဘူး။ ဒေါက်တာ မောင်မောင်ရဲ့ စာအုပ် Sangha and Laity က မဟာဝိဇ္ဇာကျောင်းသားတွေ ဖတ်ရတဲ့ထဲ ပါတယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ အခန်းက လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းကျမှ ပိုများလာတယ်ထင်ပါတယ်။ SOAS စာကြည့်တိုက်မှာလည်း ဗမာစာအုပ် တော်တော် စုံပါတယ်။ နောက်တခန်းမှာ ၂၀ ရာစု အ၀င်ကနေ အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရေး (၉၁ဌာန အုပ်ချုပ်ရေး) တိကနဲ ပြတ်သွားတဲ့ အချိန်ထိ အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံတွေ၊ နောက်လူထုတောင်းဆို လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်း ရေးမယ်စိတ်ကူးပါတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်အကြောင်းမို့ အင်္ဂလိပ်လို source တွေကတော့ ဒီမှာပေါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ သူတို့ ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကို ဦးတည်ပြီးရေးသွားမယ် စဉ်းစားထားပါတယ်။
Posted by watote | 28/05/2010, 09:07 Reply to this comment	ဖြည့်ရပြန်ပြီ
Posted by tint oo | 28/05/2010, 09:13 Reply to this comment	Waiting for the sequels to come. But, please don’t let it beaload for you. Until now, I do not have any question to raise regarding the post. Hope many will come up in the sequels.
Posted by Nanda | 28/05/2010, 09:25 Reply to this comment	အင်းလေ
Posted by tint oo | 28/05/2010, 10:03 Reply to this comment	Hmmmm..
Posted by Watote | 28/05/2010, 11:59 Reply to this comment	သံသရာဆွဲဆန့် လို့ ဘယ်လောက်ပင်ရှည်ရှည်
Posted by tint oo | 28/05/2010, 13:27 Reply to this comment	ဗျို့အကိုစိုးနိုင်
Posted by tint oo | 28/05/2010, 13:29 Reply to this comment	၀တုတ်ရေ
Posted by tint oo | 28/05/2010, 13:43 Reply to this comment	ကိုဝတုတ်၊
Posted by မန်းကိုကို | 28/05/2010, 14:29 Reply to this comment	ကောင်းဗျား၊ test လို့ဆိုစဉ်ကတော့ ပို့လိုက်တာ မပေါ်ဖူး၊ ခုမှ တန်းပေါ်လာတော့တယ်။ Private စာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဦးနှောက်စားပြီပေါ့။ ဆရာကလည်း မေးလ်လည်း မထည့်ထားဘူး။
အိပ်လည်းငိုက်လာလို့ ပို့ပြီးမှ ကိုယ့်စာလုံးပေါင်းတွေလည်း မှားတာပြန်တွေ့မိတော့တယ်။ ကဲ ကိုဝတုတ်ရေ၊ ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ပြီး ကျနော့်ကွန်မင့်ကို ဖျက်ရင်လည်ဖျက်၊ မဖျက်ရင်လည်း ကျနော်ကတော့ ကိုယ်ရေးပို့ထားပြီးပြီမို့ တာဝန်ယူရတော့မှာပေါ့ဗျာ။
Posted by မန်းကိုကို | 28/05/2010, 14:40 Reply to this comment	ကိုမန်းကိုကို ပြောပြသွားတာတွေက တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဘုရင့်နောင်တို့ ၊ တပင်ရွှေထီးတို့က ကုရင်ဆိုတာ ခုမှ ပထမဆုံးကြားဖူးတာပါ။ ဘယ်လို အထောက်အထားနဲ့ပြောသလဲ ဆိုတာလည်း သိချင်ပါတယ်။ သီးသန့်လေ့လာသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလို့လည်း ထင်ပါတယ်။ သတ်ပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပိုဂရုစိုက်ပါမယ်။ (သတ်ပုံကျမ်းလည်း မကြာခင် အိမ်ပြန်ရောက်လာဖို့ရှိပါတယ်။) ကျနော်အပေါ်ဆုံးမှာ စဖွင့်ထားတဲ့ အမြင်ကလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ နာစေ၊ သာစေ ကလိလိုစိတ် လုံးဝ လုံးဝ မရှိပါ။ ကျနော် ရိုးရိုးသားသား မြင်တဲ့ အမြင်ကိုသာ ပြောတာပါ။ မှားချင်လည်း မှားနိုင်သလို သဘောမတူသူတွေလည်း များနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒိအတွက် အထောက်အထားတွေကို နောက်ပိုင်း အခန်းတွေမှာ ဖော်ပြသွားမှာပါ။ ဘာပဲရေးရေး ကျနော့်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်က no fear no favour ပါ။ နောက် အရာရာကို သံသယမျက်စိနဲ့ ကြည့်ပါဆိုတာပါပဲ။
Posted by watote | 28/05/2010, 15:44 Reply to this comment	စာအုပ်ကိစ္စကတော့ ကိုမန်းကိုကိုရေ
Posted by tint oo | 28/05/2010, 17:08 Reply to this comment	ကို(ဦး)တင့်ဦးရော၊ ကို(၀တုတ်)ရော ကျနော်စာဆိုလိုရင်းသိပ်မတည့်ပဲ ချော်သလိုဖြစ်သွားရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်။ အိပ်ကငိုက်၊ ပညာဗဟုသုတနောက်ခံကနည်း၊ အရွယ်ကလည်း အနောက်တိုင်းမှာဘ၀စရုံ၊ ပညာရေးကလည်း ၈၈ ကတည်းက လွတ်ထွက်သွားတာ ခုမှ under grad ပြန်စဖို့တောင် တစ်စစီဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်က ဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းလေးကို လက်ပူတိုက်တုံးမို့ ကလေးတစ်ယောက်ဝင်ဆွေးနွေးသလို ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
Posted by မန်းကိုကို | 29/05/2010, 01:49 Reply to this comment	ဗမာလူမျိုးတွေဟာ တရုတ်ပြည်နန်ချောင်ဘက်ကနေ ဆင်းသက်လာပြီး ကျောက်ဆည်လွင်ပြင်မှာ အခြေချနေထိုင်တယ်လို့ ဒေါက်တာသန်းထွန်းတို့၊ သူ့ဆရာ ပါမောက္ခ Luce တို့ပြောတာ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ကျနော်လည်း သေချာမသိပါဘူး။ နောက်မှတ်သားဘူးတာတခုက ဟိုးအစောပိုင်းကာလကနေ ၁၆ ရာစုလောက်ထိ အရှေ့တောင်အာရှ သမိုင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါ ဗီယက်နမ်ကလွဲပြီး ဗမာအပါအ၀င် ကျန်တဲ့ဒေသတွေရဲ့ သမိုင်းက သမိုင်းဘာသာရပ်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ ခိုင်လုံစိတ်ချရတဲ့ အထောက်အထား ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့အတွက် (တချို့ သမိုင်းဆရာတွေကလည်း ဗီယက်နမ်၊ ဗမာနဲ့ ထိုင်းမှာ အထောက်အထားကောင်းကောင်း ရှိတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အကြောင်းအရာလည်း မဟုတ်တော့ သေချာမပြောတတ်ပါဘူး။) မှန်းဆချက်တွေ များတယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းကိုယ်တိုင်ကလည်း ပုဂံခေတ် သမိုင်းကို ရေးတဲ့အခါ ကျောက်စာကိုပဲ အဓိကအားကိုးတယ်ဆိုတယ်။ anyway…
Posted by zizawa | 29/05/2010, 08:45 Reply to this comment	ဟီးး
Posted by tint oo | 29/05/2010, 08:58 Reply to this comment	ဟားဟား
Posted by tint oo | 29/05/2010, 09:04 Reply to this comment	အေးဗျာ၊ ဦးရှံစားတစ်ယောက် ဦးဒိန်းဒေါင်မရှိတော့ မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့။
Posted by မန်းကိုကို | 29/05/2010, 12:16 Reply to this comment	ကောင်းလိုက်တဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေဗျာ၊ ဒါမျိုး ဆွေးနွေးချက်မျိုးကို (မျက်ကန်းမျိုးချစ်များ၏) အနှောက်အယှက်မရှိ ဖက်ရတာက အချိုပေါ် ပြားရည် ဆမ်းသလိုပါပဲဗျာ။
Posted by ဇေယျာ | 31/05/2010, 08:58 Reply to this comment	အင်္ဂလိပ်စာတတ်သိပုံနဲ့ ideology ဆွေးနွေးချက်တွေအရ ဘိုဘိုလန်းစင်တို့လို လူငယ်လည်း မဟုတ်တန်ရာဘူး။ ကိုမန်းကိုကို ဝတုတ်သခင်က ကျုပ်မိတ်ဆွေပါ။ ကျုပ် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီက ဘာဖြစ်နေလို့ပါလိမ့်။ ကမာရွတ်က မွန်နာမည်ပါ။ ရတနာကန်။ ဆရာဦးဝန်ရေးတာ ရှိပါတယ်။ ဘုရင့်နောင်က အင်းဝဆက်ပါ။ တောင်ငူ မင်းကြီးညိုက ဗမာပါပဲ။
Posted by Bo Bo | 31/05/2010, 22:16 Reply to this comment	ဟုတ်ကဲ့ဗျား၊ ဒီတစ်ခါ ဘိုဘို ကတော့ ဘိုဘိုလန်းစင် ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုဝတုတ်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်အသုံးနှုန်းနဲ့ အိုင်ဒီယိုလိုဂျီတွေကို ဖတ်ရတာကို ကိုဘိုဘိုရေးတဲ့ ဧရာဝတီက ဆောင်းပါးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ထိုးကြည့်တယ်လို့သာ ယေဘုယျပြောပါရစေ။ ကိုဘိုဘို အရေးရဲတာ၊ မြန်မာစာအရေး သူများတွေနဲ့ နည်းနည်းကွဲတာ၊ စာပေနဲ့ သမိုင်းအကြောင်းကို စာတွေ့နဲ့ သက်ရှိသမိုင်းတွေကနေ ရယူခဲ့တယ်လို့လည်း နားလည်ရပါတယ်။ ချွတ်ယွင်းချက်ရယ်လို့ မြင်မိတာတော့မရှိသေးပါဖူး။
Posted by မန်းကိုကို | 01/06/2010, 10:22 Reply to this comment	ပို့စ်သုံးခုစလုံးကို မှတ်ချက်တွေကိုပါ တခါတည်း လာဖတ်သွားပါတယ်။ အမှန်က မှတ်ချက်ကို အပေါ်ဆုံးပို့စ်မှ ထည့်ချင်တယ် အဲဒီမှာ မှတ်ချက်နေရာ မပေါ်လို့ မထည့်ဖြစ်တော့ဘူး။ စာမေးပွဲကလည်း ရှိနေတယ် စာကလည်း ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ ကျွန်မက လွတ်လပ်ရေး မရခင်က သမိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ငယ်ငယ်က ရှစ်တန်းအထိ သင်ဖူးတာနဲ့ နေ့ကြီးရက်ကြီးတွေနီးရင် ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေ ပြောပြတာပဲ သိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းလည်း လွတ်လပ်ရေး ရပြီးကလ သမိုင်းကိုပဲ ဖတ်ဖြစ်ပြီး အရင်ကအကြောင်းတွေ မဖတ်ဖြစ်တော့ အခုသိရတာတွေဟာ ကျွန်မအတွက် သိပ်ပြီး ဗဟုသုတ ရပါတယ်။ နောက်မှ အချိန်ယူပြီးပြန်လာဖတ်ဦးမယ်။ ဘက်စုံသိတဲ့ ဆရာတင့်ကိုတော့ ချီးကျူးပါတယ်။
Posted by Nge Naing | 01/06/2010, 02:28 Reply to this comment	ဟုတ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီမှာ ကော်မန့်ပေးတာလဲ ဖတ်ရပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ ကျနော်တို့ဗမာစာမျိုး သိပ်ရေးကြမှာ မှုတ်ဘူး။ ဆရာဦးဝန်က မွန်စပ်တယ်။ မြန်မာအဘိဓာန်ဖခင်လဲဖြစ်တယ်။ ဆရာသန်းထွန်းလဲ အောက်ပြည်က မွန်မြို့ ရွာတွေအကြောင်းရေးပါတယ်။ နိုင်ပန်းလှကတော့ မွန်ပဏ္ဍိတ်ပါ။ ကရင်နာမည်နဲ့ထင်ရှားတာ အောက်ပြည်မှာ သိပ်မမရှိပါဘူး။ Excising the ‚Mon Paradigm’ from Burmese historiography
Victor Lieberman လိုစာတွေထဲ ရှာဖတ်ရမှ ပိုသိမှာပဲ။ မင်းကြီးညိုက တပင်ရွှေထီးအဖေပါ။
Posted by Bo Bo | 01/06/2010, 10:47 Reply to this comment	အေးဗျာ၊ ဧရာဝတီမှာ ကိုဘိုဘိုကို ကွန်မန့်ပေးခဲ့တာ အဲဒီမှာ နောက်ဆုံးပေးခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်ထင်ပါတယ်။
Posted by မန်းကိုကို | 02/06/2010, 10:44 Reply to this comment	ကရင်အမည်နဲ့ ထင်ရှားတာတော့ မရှိသလောက်ဆိုတဲာမို့ ရွာနာမည်တွေ ပြောတာပါ။ မောင်စင်ကြယ် (မန်းညွန့်မောင်) က နာမည်ကြီးပါ။
Posted by Bo Bo | 02/06/2010, 17:59 Reply to this comment	ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ကျနော်တို့၊ ကိုဘိုဘိုတို့ ကြီးပြင်းလာကြချိန်မှာ ဗမာမှုပြုထားတာတွေက အတော်ခရီးရောက်နေပြီလေ။ အခု ဖားအံ (ဘားအံ) ဆိုတာ ကရင်လို `ထာ့အောင်´(အ၀ကျယ်)၊ ကော့ကရိတ် ကို `ကိုတလိုင်´(အင်တော ဆိုလားပဲ) စသည်ဖြင့် အမည်ရင်းတွေရှိတာ လူမသိကြတော့ဘူးဗျ။ ဧရာဝတီမြစ်လည်း ကရင်အမည်ရှိပါတယ်။ မြ၀တီလည်း ဦးစတို့ရောက်မှ မြ၀တီဆိုပြီး စဖြစ်လာပါတယ်။ အရင်ကတော့ ကော့ကရိတ် (ကရင် ၆ မြို့ နိုင်ငံ) ဘုရင်ရဲ့လက်အောက်ခံ ခံတပ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by မန်းကိုကို | 03/06/2010, 08:18 Reply to this comment	ကိုမန်းကိုရေ
တရားထူထောင်တဲ့အနေနဲ့ သမိုင်းကို ‘ထွင်’ တာတွေ မလုပ်မိအောင် သတိထားရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဥပမာ ပါကစ္စတန် နှစ်ငါးထောင် သမိုင်းဆိုတဲ့ စာအုပ်မျိုးဟာ ထွင်သမိုင်းကြီးပါ။ ၀တုတ်
Posted by zizawa | 03/06/2010, 16:36 ကိုဝတုတ်ပြောတာတွေ မှားတော့မမှားပါဘူး။
Posted by မန်းကိုကို | 04/06/2010, 08:17 Reply to this comment	မှတ်ချက်တွေကို ဖတ်ရတာ လှတယ်လို့ပြောချင်တယ်။ လူမျိုးရေးကို ထဲထဲဝင်ဝင် ဆွေးနွေးနေကြပေမယ့် ဒီလိုမျိုး သမာသမတ် တည်တည်တံ့တံ့ ပြောနေကြတာတွေ့တော့ လေးစားမိပါရဲ့။ အဲဒီလို လေ့လာမှုတွေကို နှစ်သက် အားပေးပါတယ်။
Posted by WinSg | 05/07/2010, 11:23 Reply to this comment	Ko Tint Oo သို့
Posted by comet | 18/07/2010, 13:49 Reply to this comment	ကောင်းတယ်ဗျာခုလို ရှေးရှေးကလူကြီးတွေကပြုစုထားတော့နောက်လူတွေသိ၇တာပေါ့အဲဒီလို လူမျိုးတွေများများပေါ်ပေါက်ပါစေဗျာ
Posted by က၇င်လေး | 24/08/2010, 02:50 Reply to this comment	မင်းတိုိ့ဘာပဲပြောပြော ပစ္စုပန်မှာတော့ ဒါဗနာပြည်ပဲ အနုရုဒါ ဘုရင့်နောင် အလောင်းမင်းတရား ဗိုလ်ချုအ်အောင်ဆန်း အားလုံးဗမာတွေပဲ တိုင်းရင်းသားလဲဗမာပဲ နေရာဒေသကွဲ နေလို့ပါ ဗမာနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူအားလုံးဗမာပဲပေါ့ ခေါင်းရူပ်မခံပါနဲ့ နိုင်ငံသာတိုးတက်အောင်လုပ်ကြပါ
Posted by သာကီမျီုးဟေ့တို့ဗမာ | 28/10/2012, 13:59 Reply to this comment	မင်းတိုိ့ဘာပဲပြောပြော ပစ္စုပန်မှာတော့ ဒါဗနာပြည်ပဲ အနုရုဒါ ဘုရင့်နောင် အလောင်းမင်းတရား ဗိုလ်ချုအ်အောင်ဆန်း အားလုံးဗမာတွေပဲ တိုင်းရင်းသားလဲဗမာပဲ နေရာဒေသကွဲ နေလို့ပါ ဗမာနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူအားလုံးဗမာပဲပေါ့ ခေါင်းရူပ်မခံပါနဲ့ နိုင်ငံသာတိုးတက်အောင်လုပ်ကြပါ
Posted by သာကီမျီုးဟေ့တို့ဗမာ | 28/10/2012, 14:11 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...